प्रेमिकालाई विर्सेर पनि नभन्नुस् यी कुराहरु
लभ, रिलेशन, डेटिङ – यी सबैको हरेकको जीवनमा निकै महत्व हुन्छ । कुनै जोडी सम्बन्धमा आएपछि प्रेमिल समयलाई निकै सुन्दर तरिकाले बाँच्ने गर्दछन् । फोनमा कुरा गर्नु, च्याट गर्नु, सँगै घुम्नु, एक अर्कास...
आफ्नो श्रीमतीसंग यी ५ कुराहरु भुलेरपनि पनि नगर्नुस्
सोमबार, १२ पौष २०७८
काठमाडौं । श्रीमान् श्रीमतीबिचको सम्बन्ध केवल एक सम्बन्ध मात्र नभएर एक विश्वास पनि हो । यस्तोमा श्रीमान् श्रीमतीबिच हरेक कुराको साटासाट हुन आवश्यक छ । तर कतिपय यस्ता कुराहरू छन् जो आफ्नो श्रीमतीलाई पन...
गुल्मी अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा नआउँदै खिया
गुल्मी । गुल्मी अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा नआउँदै खिया लाग्न थालेको छ । तम्घासस्थित गुल्मी अस्पतालमा जडानका लागि ल्याइएको अक्सिजन प्लान्टका विभिन्न सामग्रीहरुमा खिया लाग्न थालेका हुन् । कोरो...
विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने
काठमाडौं । विदेशबाट आफूखुसी ल्याइएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भएका छन्। अनौपचारिक रूपमा ल्याएका त्यस्ता मोबाइल सरकारले नेपालमा नचल्ने बनाउन लागेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुनसुकै माध्यमबाट मो...
दम्पतीको उमेर ग्याप कति बर्ष ठिक हुन्छ : तपाईको कति छ ?
काठमाडौ । दम्पतीको उमेर ग्याप कति बर्ष ठिक हुन्छ, तपाईको कति छ ? अध्ययनले यसो भन्छ । हाम्रो समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुन्छ । अक्सर श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ...
खाना खाएपछि यी ६ काम गर्दा हुन सक्छ : मुटुरोग र क्यान्सर
एजेन्सी। खाना खाएपछि धेरैको आराम गर्ने, आनन्द लिने बानी हुन्छ। तर विभिन्न अनुसन्धान अनुसार खाना खाइसकेपछि दुई घण्टासम्म विभिन्न कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। एक रिपोर्टका अनुसार खाना खाएपछि यी ६ काम गर...
भारतका कोठीमा नेपाली महिलाका नारकीय दिन
काठमाडौँ । गत वैशाख १७ गते २५ वर्षीया युवती नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोमा आइपुगिन् । किटानी जाहेरी बोकेर आएकी ती युवतीले भोगेको कथा ब्युरोका अनुसन्धान अधिकारीका निम्ति नयाँ थिएन तर मनै रुवाउने...
यी हुन् मासुबाट भन्दा तेब्बर फाइदा दिने खानेकुराहरु
अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार मासुबाट भन्दा ड्राइ फ्रुट्स तथा बीउबिजनबाट प्राप्त हुने प्रोटिन मुटुका लागि स्वस्थकर हुन्छ । मासुबाट प्राप्त हुने प्रोटिनले मुटुरोगको खतरा बढाउँछ । जसले मासुजन्य...
भक्तपुरमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ नेमकिपाका अध्यक्ष विजुक्छेंको परिवारबाट सुरु
बिहीवार, २५ कार्तिक २०७८
भक्तपुर । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्य गणना कार्य मिति २०७८ कार्तिक २५ गतेदेखि मंसीर ९ गतेसम्म देशैभरी आरम्भ भएको छ । सोही क्रममा भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ने...
नेपाल कसरी युरोपका लागि मानव तस्करीको ‘निर्यात मुलुक’ बनिरहेको छ ?
बार्सिलोना । धन कमाउने रहर, विदेशले तान्यो । तर अहिले धनको कुरा छोडदिउँ मन नै बेचैन छ । जीवनको अध्याय नै फेरियो । समयले ठूलो उतार–चढाव ल्याइदियो । बाँच्न धिक्कार सम्झिएर उनले कति पटक त म...